Kan Dunida Ugu Horeeya! Fadhi Amni Oo Faa'iido Leh-Inka Musqusha, Si Aad Ugu "Baadhid" Xawaarahaaga Adigu
Bogga ugu weyn / blog / Kan Dunida Ugu Horeeya! Fadhi Nabdoon Oo Faa'iido Leh Oo Ku Yaal Musqusha, Si Aad Ugu “Maydho” Xawaarahaaga
Kan Dunida Ugu Horeeya! Fadhi Nabdoon Oo Faa'iido Leh Oo Ku Yaal Musqusha, Si Aad Ugu “Maydho” Xawaarahaaga
2021 / 04 / 22 Qoondayntablog 1079 0
Shabakadaha Musqusha ee Shabakada Asalka ah Headlines
"Maydhashada iyo foox shidida, biyaanada oo la riyaaqo oo loo riyaaqo chrysanthemum", dadku waxay si tartiib tartiib ah ugu xuubsiibteen maydhashada dhaqan cayaareed muhiim ah, oo muujinaya jacaylkeena iyo kalgacaylkeena nolosha. Qubayska, oo ah raaxada ugu nabdoon uguna raaxada badan ee maalinteenna, ma aha oo kaliya inay baabi'in karto daalka maalinta, laakiin sidoo kale waxay keeni kartaa waayo-aragnimo maydhasho oo ka duwan, halkaasoo laga furi doono maalin cusub, laakiin sidoo kale halkan ayaa lagu sagootinayaa dadka mashquulsan maalin.
Loogu talagalay si taxaddar leh, u daryeesho adiga iyo aniga, kaliya si aan kuu siiyo raaxada ugu fiican ee qubeyska
Sida laga soo xigtay warbixinnada, in ka badan 20,000 oo dhimasho ah shilalka guryaha ka dhaca ayaa sannad kasta ka dhaca Faransiiska, kuwaas oo ay ka mid yihiin, dhimasho badan waxaa sababa ku soo dhaca musqusha musqusha, oo ay ku gubtaan biyo kulul ama ay ku haftaan. Qiyaastii 4,000 oo qof ayaa u dhinta sannad kasta qubayska qubayska dartiis, taas oo ka badan tirada dadka ugu dhinta Faransiiska shilalka taraafikada sanadka oo dhan (3,259 sanadka 2018).
Shilalkaan, ayaa inaga dhigaya inaan ahmiyad weyn siino helitaanka barkadda qubeyska oo ku habboon labadaba waayeelka, naafada, bukaanka, haweenka uurka leh, caruurta yar yar, dadka lugaha jilicsan iyo dadka kale, gaar ahaan dadka curyaamiinta ah ee sida gaarka ah loogu talagalay, ma ogtahay inay jirto mid? Aan kuu soo bandhigo hadiyad diiran oo raaxo leh oo iyaga u gaar ah - “fadhi-ku-qubeys”.
Fadhi-ku-qubeyska barkadda qubeyska
Qubeyskani waa kan ugu horreeya adduunka “Fadhiga barkadda qubeyska” waxaa sameeyay Mudane Li Wei, khabiir cilmi-baaris sare ah iyo naqshadeeye warshadaha fayadhowrka, taas oo daryeel badan u leh waayo-aragnimada saxanka qubeyska. Qolka qubeyska lagu fadhiisto waa oo si gaar ah loogu talagalay waayeelka, naafada, jiran, haweenka uurka leh, kuwa aan qaan gaarin, dadka lugaha tabarta daran, gaar ahaan dadka curyaamiinta ah.
Naqshadeynta bini-aadamka, waxaad dareemeysaa raaxo iyo raaxo meel lagu maydho
Dhamaanteen waan ognahay in suuliga uu qoyanyahay mudo dheer dhulkuna uu sibiibix yahay, qaasatan markaan soo galno kana baxno barkada qubayska oo siman oo sibiibix ah, way fududahay siibashada iyo dhicitaanka. Dadka caafimaadka qaba waa inay taxaddaraan gudaha iyo banaanka barkadda qubeyska, laakiin sidoo kale lama huraan badanaa waxay ku dhacdaa xaalad aan degganeyn.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee barkadani waa 2 dhibcood: marka hore, naqshada fudud ee barkadan lagu qubeysto waxay u oggolaaneysaa naqshadeynta inay asal ahaan ka soo jeedo. Fudud wuxuu la mid yahay sida habboon, waxaad si xor ah ugu habboonaan kartaa meel kasta, markaa waad ku 'qubeysan kartaa' xawaarahaaga.
Marka labaad, hawlgalka barkadda qubeyska waa mid fudud, ammaan ah oo dhakhso leh. Markaad isticmaaleyso, hal dhinac oo ah wiishka musqusha ee lagu qubeysto oo ku xiran kursiga rakibaadda, kuna laalaada taangiga. Markii kursigeenna kor loo qaado, saxanka kursiga iyo cidhifka saxanka qubeyska oo isla dherer ah, waxaan si fudud ugu boodi karnaa kursiga oo lugaha ugu ridi karnaa taangiga. Markii aan hoos u dhigno kursiga sagxadda taangiga, waanu maydhan karnaa, dabaalan karnaa isla markaana si caadi ah u duugi karnaa.
Markii aan dhamayno maydhashada, waxaan kor u qaadi karnaa kursiga ilaa qarkiisa qubayska qubashadiisa oo ay weheliso saxanka kursiga, waan soo jeesan karnaa oo lugaha ayaan kor u qaadi karnaa si aan uga guurno haanta, maydhashada ayaa dhammaatay.
Marka dusha sare ee kursiga wiishku uu dhererkiisu le'eg yahay cidhifka saxanka qubeyska, way nagu habboon tahay inaan fadhiisanno ama ka soo baxno barkadda qubeyska, waxaan ku fadhiisannaa kursiga ka dib markii kursiga lagu rido haanta. Qubeyska, is dhexgalka qubayska, si loo daboolo baahiyahaaga kala duwan. Hawlgalka qaadista waxaa xukuma badhamada koontaroolka koontaroolka haanta, labadaba fudud oo sahlan, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay nashqad aan anti-dhicid anti-dhicid ah. Daryeelka qubeyskaaga ayaa ah xulashada koowaad ee barkadda qubeyska.
Dhinaca musqusha ee dhanka derbiga, waxaad ku dari kartaa shaashadda dhalada galaaska, waxaad u beddeli kartaa qolka qubeyska ee waayeelka ama naafada. Iyada oo ay ku shaqeyso anti-silbashadu iyo anti-dhiciddu, ayaa ka ammaan iyo dhib badan annaga oo aan fadhiisanno ama ka soo baxno qubeyska. Isla mar ahaantaana, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sidii cag-dhigid, fadhi iyo dibedba, biyo dhigis lagu duugaayo lugaha iyo cagaha.
Kordhinta iyo dhicitaanka kursiga wiishka waxaa xakameynaya koontaroolka gundhigga ku leh cidhifka kore ee haanta, taas oo la mid noqon karta qaybaha kale ee kontaroolada shaqada ee tubbada qubeyska. Intaas waxaa sii dheer, barkadda qubayska wiishka ee fadhi-ku-taalku wuxuu yeelan karaa meel bidix iyo midig u jeeda sida waafaqsan jihada musqusha.
Hore:: Musqulahaan sidoo kale waa kuwo aad u qiimo badan, Dhammaantood ma aragtay? Next: Qurxinta Qolka Musqusha Ee 16ka "Faahfaahinta Eebbe", Samee Wax Sax ah, Waxay Ka Dhigi Kartaa Shaqooyinka Badh Badbaadinta
2021 / 05 / 28 550
2021 / 04 / 22 907
2021 / 04 / 21 670
2021 / 04 / 12 850